Ciyaaryahan Thierry Henry oo Ciyaaraha Ka Fariistay – Radio Muqdisho
Weeraryahankii hore ee kooxda Arsenal iyo xulka France Thierry Henry ayaa maanta ku dhawaaqay in uu ka fariistay ciyaarista kubada cagta,ka dib markii uu 20-sano ciyaarayay.
Ciyaaryahan Henry oo sanadkii 1998-dii koobka aduunka kula guuleystay xulka France,islamarkaana ah ciyaaryahanka haysta rikoorka gool dhalinta ee kooxda Arsenal ayaa bishan ka tegay kooxda New York Red Bulls oo uu ciyaarayay sanadihii ugu danbeeyay.
Ciyaaryahan Henry oo 37-jir ah ayaa u soo ciyaaray kooxaha Monaco, Juventus, Arsenal,Barcelona iyo New York Red Bulls .
Ciyaaryahan Thierry Henry ayaa intii uu ciyaarayay kooxda Arsenal waxa uu horyaalka ingiriiska ka dhaliyay 175-gool.,waxana uu yahay ciyaaryahanka afaraad ee ugu gool dhalinta badan horyaalka ingiriiska.
Ciyaaryahan Henry oo kooxda Arsenal u ciyaarayay intii u dhaxeysay sanadihii 1999 iyo 2007 ayaa kula guleystay labo horyaal iyo sedax FA Cup.
Ciyaaryahan Henry ayaa sanadkii 2009 kooxda Barcelona kula guuleystay koobka Champions League-ga.
Ciyaaryahan Henry ayaa sanadkii 2010 ku biiray kooxda New York Red Bulls ee dalka Mareykanka,isagoo sanadkii 2012 si amaah ah ugu ciyaaray kooxda Arsenal.
Ciyaaryahan Henry ayaa waxa uu la shaqo bilaabayaa Kanaalka Sky Sports oo ka faalooda ciyaaraha.